READ: Mnangagwa's call to Robert Mugabe to resign — The Citizen
Mnangagwa says he will return to Zimbabwe when his safety is guaranteed.
Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe’s ousted vice-president, has written a lengthy statement calling for President Robert Mugabe to resign. Mnangagwa said the call from the people of Zimbabwe for Mugabe to resign was also “the voice of God”.
“To me, the voice of the people is the voice of God and their lack of trust and confidence in the leadership of President Mugabe has been expressed. Several groups, including students‚ general workers‚ opposition party members‚ vendors‚ religious organisations and ordinary citizens led by our war veterans‚ our party members in Zanu PF‚ civic society‚ and all races of colour and creed in Zimbabwe clearly demonstrated without violence their insatiable desire to have the resignation of His Excellency‚ Cde Robert Gabriel Mugabe,” he said.
He also said Mugabe had contacted him in an attempt to get him to return to Zimbabwe, but refused, and said he would only return once he felt it was safe to do so.